Goobihii uu Dagaalku ka dhacay ee Magaalada Bosaaso ayaa Degan Galabta[Daawo Sawiro] | maakhir.com
Goobihii uu Dagaalku ka dhacay ee Magaalada Bosaaso ayaa Degan Galabta[Daawo Sawiro]
January 10, 2008 in Somalia
Bosaaso:- Waxa degenaansho laga soo sheegayaa goobihii uu saaka Dagaalku ka dhacay ee gudaha Magaalada Bosaaso, goobahaasi ayaa waxa lagu arki karayaa Kumanaan dad ah oo taagan kuwaasi oo u soo daawashada tegay goobahaasi uu Dagaalku ku dhex maray Ciidamada Maamulka Puntland iyo Malayshiyadii daacada u ahay Wasiirkii Hore ee la casilay Siciid Maxamed Raage.
Dagaalkii saaka ka dhacay gudaha Magaalada Bosaaso ayaa waxa uu sababay khasaare lixaadle kaasi oo gooba badan oo ay fadhiisin ku la haayeen Ciidamada Maamulka Puntland lagala wareegay,waxa kale oo Ciidanka Puntland gacanta lagaga dhigay Baabuur Dagaal.
Laba Baabuur ayaa Gacanta lagag dhigay ciidanka Puntland ayaa waxay ahaayeen nooca loo adeegsado Dagaalka kuwaasi oo mid ka mid ah uu ku xidhanaan Qori.
Jid ka mid ah Kuwii uu Dagaalku dhacay oo Cid la ah
Dhamaan goobaha Ganacsiga ayaa la xidhay iyada oo any jirin wax Bakhaaro ah oo furan,dadka qaar ayaa ka soo barakacay Xaafada Biyo Kulule oo ah Goobta uu Dagaalkaasi ka dhacay, Boqolaal Qoysa ayaa arkaysaa oo Madaxa ku sita Alaabtoodii si ay ugu hayaamaan goob Amaan ah ay ku bad baadi karaan.
Gaadhi Laga Qabsaday Maamulka Putland
Baabuurta gacanta lagaga dhigay Maamulka Puntland ayaa haatan waxay yaaliin Goobihii uu dagaalku dhacay,waxana Gubay Shacab Cadhaysan oo aad uga soo horjeeda Maamulka Puntland siyaasadiisa, sida aad sawirkaas ku arkataan Baabuurkaas ayaa waxa lagu garaacay Dhagaxaan isaga oo dhinaca Dhulka loo dhigay Markii danbe Dab la qabadsiiyay.
Suuqa Bacadla ha ee magaalada Bosaaso ayaa gabi ahaanba xidhan waana suuqa ugu wayn Magaalada Bosaaso,dadka inta badan waxay cabdi xoogan ka qabeen inay haleesho xabad wiift ah.
Kumanaan ruux dad kur u dhaafaya ayaa isa soo dhoobay goobihii uu Dagaalku ka dhacay kuwaasi oo shucuurtooda ay ka muuqatay sida ay uga xun yihiin qaabka ay wax u wadaan ciidamada Puntland oo iyagu had iyo jeer rasaasta dadku kusoo ridayay.
Dadkaasi waxay xidheen wadooyinka dhamaan goobahasi soo gala iyaga oo qubay dhagaxaan waa wayn si ay u joo jiyaan Ciidamada Puntland.
Wararkale oo haatan naga soo gaadhay ayaa waxay sheegayaan in labada nabadoon jeelka loo taxaabay kuwaasi oo Maamulk Puntland qabteen waxayna ku eedeeyeen inay isku hayb yihiin dhalinta Guriga lagu weeraray.
arima layaab ah o ka dhacaaay wadaaan ka italia arimaan kas o ah arimaan laga fajoco
manta subax nimadi o gabaar somaila atasonka palermo eey ku jishaay sigiis inai laah waa ina ilaah ragacuun
« Dagaal xoogan oo maanta ka dhacay gudaha Magaalada Bosaas
[OGEYSIIS] Mudarahaad ka Dhacaya Wasaarada Arimaha Dibada & Aqalka Odayaasha Capitol Hill Ee Wadanka Maraykanka »